Haddii uu tago David De Gea kumaa noqon doona goolhayaha koowaad ee kooxda Manchester United? – Gool FM
(Manchester) 22 Maajo 2019. Waxaa la soo warinayaa in Sergio Romero uu noqon doono goolhayaha koowaad ee Manchester United, haddii uu David de Gea uu ka tago garoonka Old Trafford suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
De Gea ayaa waxaa heshiiskiisa haatan uga harsan hal sano oo qura, xiddiga xulka qaranka Spain ayaana la isla dhexmarayaa warar la xiriirinaya inuu ka tagi doono xagaagan kooxda 20 goor ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska.
Man United ayaa la rumeysan yahay inay diiradda ku hayso goolhayaha Barcelona ee Jasper Cillessen iyo midka Ajax ee Andre Onana si ay u noqdaan bedelka ugu macquulsan booska uu ka baxayo goolwalihii hore ee Atletico Madrid.
Yeelkeede, Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa warinaya in Tababaraha Red Devils ee Ole Gunnar Solskjaer uu lambarka koowaad ee goolhayaha Man Utd u soo dallacsiin doono Romero, halkii uu la soo saxiixan lahaa goolhaye kale haddii xaqiiq uu tago De Gea.
Manchester United ayaa beeca xorta ah kula soo saxiixatay Romero bishii July ee sanadkii 2015-kii, kaddib markii ay siideysay kooxda Sampdoria.
96 kulan ayuu Romero u saftay xulka qaranka Argentina, halka uu 44 kulan u saftay kooxda reer England ee Man United tartammada oo dhan, inkastoo uu ciyaaray kaliya hal kulan oo Premier League ah tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii 2017-18.
David Beckham oo maanta ka soo muuqday tababarka ay Tottenham isugu diyaarinaysay Final-ka Champions League & Sababta ka dambeysa oo daaha laga rogay... + SAWIRRO